Runta in la waajaho ka fursan mayso…W/Q Cabdirisaaq Terra – somalilandtoday.com
Runta in la waajaho ka fursan mayso…W/Q Cabdirisaaq Terra
Somaliland Dawladnimo ka bilaabantay waa layna xasuuqay kuna dhisan waa kuwaa kuwii na-xasuuqay; sidan ayayba ku cimri dheeraatay.
Ujeedada ugu weyn ee dowladi u taagan tahay ayaa ah in ay hubiso, ka shaqeeyso sidoo kalana keento in bulshada ay’ u taliso ee dowlada u tahay ay nolol wanaagsan u keento kana ilaaliso nolosha xun ee dhibka badan.
style=”font-size:16px;”>Somaliland 9 Sannadood ka hor kiishka bariiska ahi wauxuu ahaa tobbaneeyo dollar maantana cirKa ayuu marayaa, suuqa dunidu waa isla kii oo quutal-daruurigu waa waxa aan cidna ka suurtagelin inuu kor u kaco, taas bedelkeeda Somaliland waxaa Faan ay ka dhigataa in miisaaniyad sannadeedkeedu gaadhay $ 400 milyan oo dollar.
Shacab daldalan oo xadhig qoorta lagaga xidhay kadib laga dhaliyey $400 milyan, marka loo khudbadaynayo’na la leeyahay waa tii lay na xasuuqay iyo kuwaas baa ina xasuuqay haddii aynu dawlad ku sii ahaan karno oo weliba Illaahayna Ictiraaf kaga sugayno iyaba waa nacasnimo la-kordhabay.